Katedralin'i Lima, Katedralin'i Md John evanjelista - Lima
Amerika Atsimo Peru Lima
Adiresy: Jirón Carabaya, Lima 15001, Peroa
Toe-karazana Architecten: Renaissance architecture, Architecture Neoclassical, Gothique architecture
Fotoana misokatra: 09: 00-17: 00, Asabotsy 10: 00-13: 00, Alahady: 13: 00-17: 00
Vidin'ny saram-bidy: $ 10-15
Ny Katedraly ao Lima any Però dia modely iray mifangaro endrika samihafa. Noho izany dia naharitra telo taona ny fanorenana fototra, taorian'izay dia naverina tamin'ny laoniny ny trano. Ny katedralana no tena endriky ny kianjan'i Lima , saingy toa mahafinaritra be ny alina amin'ny alina, rehefa manazava ny taranjam-pikarohana marobe.
Ny katedralin'i Lima dia miorina eo an-dalamben'ny tanàna - Plaza de Armas . Ny fanorenana dia natao tamin'ny 1535 hatramin'ny 1538. Mandra-pahatongan'izany, ny fiangonana rehetra izay naorina dia samy hafa tamin'ny endrika laconic, izay nifandray tamin'ny horohoron-tany maro. Saingy raha ny amin'ny Katedraly, ny architects dia naniry nanantitrantitra ny maha-zava-dehibe ny fiangonana katolika amin'ny vanim-potoanan'ny fanjanahantany, noho izany dia nahitana ny rafitra noho ny haavony sy ny endrika tsy mahazatra.
Hatramin'ny taona 1538 tany Peru, imbetsaka no nisy horohoron-tany lehibe, ka matetika no naverina ny trano. Ny endriky ny Katedraly ao Lima ankehitriny dia vokatry ny fanarenana tanteraka ny taona 1746.
Ny katedralina dia iray amin'ireo rafitra maoderina indrindra ao an-drenivohitra sy ny toeram-ponenana malaza ao Peru , izay karazana "fifangaroana" amin'ny fomba amam-bika samy hafa. Mandeha manerana ny katedralina, afaka mahita ny fomba fanehoana ny fomba Gothique, Baroque, Classicisme ary Renaissance. Anisan'ny tranobe, noforonina ao amin'ny fomba barok, dia misokatra amin'ny Plaza de Armas. Izy io dia mamela soritra mampientanentana noho ny haben'ny sary sokitra voasokitra, firavaka sy tsangambato mahazendana. Ny fotodrafitrasa manan-danja dia ahitana ireto faritra manaraka ireto: ny onja afovoany, ny roa tonta, ny chapelle 13.
Rehefa mandalo ny tokonam-bavahadin'ny katedralina ianao, dia mahita ny efitrano lehibe misy ravina avo be, rindrina fotsy, mosaika sy tsanganana. Ny efitrano lehibe, izay manana endrika havanana, dia mampahatsiahy ny Katedraly Seville. Ny vaovaom-gôtika dia manohana ny tampon'ny katedralina, izay mamorona ny vokatry ny lanitra feno kintana. Ireo singa ireo dia vita hazo matanjaka, izay manampy amin'ny fitazonana ny rafitra mandritra ny horohoron-tany.
Ny efitrano afovoan'ny Katedraly ao Lima dia natao tamin'ny fomba fanorenana Renaissance, noho izany dia afaka mahita sarin'i Kristy sy ireo Apôstôly ianao eto. Ireo alitara, izay natao tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fomba barock, dia nosoloina alitara hafa. Ireo tilikambo fiokoana roa ao amin'ny katedraly dia mitovy amin'ny fomba amam-panao amin'ny klasika.
Iray amin'ny onja tandrifin'ny lohataona mankany Patio de los Naranjos, ary ny iray kosa mankany amin'ny lalana de Giudios. Nandritra ny famerenana tamin'ny laoniny farany tao amin'ny fiangonan'ny havia, dia nisy ny hosodoko fahiny, izay hitan'ny mpitsidika rehetra. Eto dia afaka mankafy ny sarin'ny Virjina Mary la Esperanza ihany koa ianao. Afaka mitsidika ny chapelan'ny Fianakaviana Masina ianao, izay ahitana sarivongan'i Jesosy Kristy, Josefa sy Maria.
Ny artifact lehibe ao amin'ny Katedralin'i Lima dia fasana marobe an'ny Francisco Pizarro. Io conquistador Espaniola io tamin'ny taona 1535 no nifehy ny fanorenana ny katedralina. Raha manapa-kevitra ny hampiditra ny fandaharam-pandehananao momba ny Katedraly ao Lima ianao, dia mariho fa mihidy ny fialan-tsasam- pirenena. Tokony ho fantatrao ihany koa fa tsy afaka miditra ao amin'ny katedral ianao ary tsy azo atao ny maka sary.
Ny katedral dia miorina ao afovoan'i Lima ao amin'ny Plaza de Armas, izay ahitanao koa ny Lapan'ny tanàna , ny lapan'ny arseveka sy ny maro hafa. sns ... Afaka miditra aty amin'ny arabe mpandeha an-tongotra mivantana avy ao amin'ny St. Martin Square ianao. Bilaogy roa monja avy ao amin'ny katedralina no station Station Station Desamparados.
Fiarovana an'i King Philip
Ny Monasteran'i Las Nazarenas
Ny valan-javaboarin'i Hornopiren
Ahoana ny fomba handrafetana akanjo hoditra?
Photoshoot ao amin'ny tranomboky
Ilay dobo tao an-trano
Fortune milaza ny voninkazo
Mycoplasma genitalia - inona io?
Latabatra kafe avy amin'ny hazo mafy
Fashion ho an'ny vehivavy fohy 2014
Kitiho ny saka Britanika
Pigtails mody 2013
Fonosana hazo matanjaka ho an'ny lakozia
Akipika fitsaboana hafahafa